हेर्नुहोस आजको राशिफल : मङ्गलबार कस्तो रहनेछ तपाईंको भा’ग्य ? – Khabarhouse
हेर्नुहोस आजको राशिफल : मङ्गलबार कस्तो रहनेछ तपाईंको भा’ग्य ?
Khabar house | २५ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०१:२१ | Comments
ज्योतिषि डीपी भण्डारी : वि.सं. २०७७ साल फागुन २५ गते । मङ्गलबार । इस्वी सन् २०२१ मार्च ०९ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । श्रीशाके १९४२ । फाल्गुण कृष्णपक्ष । तिथि–एकादशी, २४ घडी ५७ पला, बेलुकी ०४ बजेर २१ मिनेट उप्रान्त द्वादशी । काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर २२ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ०८ मिनेट । दिनमान २९ घडी २४ पला । विजया एकादशी ।
मेष : साङ्गीतिक माहोलमा दिन बित्ने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा गरिएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । नीति निर्माण तहमा तपाईंको सहभागिताले महत्त्व पूर्ण भूमिका खेल्नेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने पढाइ लेखाइमा भनजस्तो सफलता हुनेहुँदा मन प्रसन्न रहनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा पदोन्नतिको गतिलो योग रहेको छ ।
वृष : लामो धा’र्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला बाटोमा दुःख हुन सक्छ । सामाजिक कामको सिलसिलामा व्यास्त हुने समय रहेको भए पनि प्रतिफल शू’न्य जस्तै हुनेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा गरिएको लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुनेछ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा दा’ग लाग्न सक्छ ख्याल गर्नुहोला । नीतिनिर्माण तहमा तपाईंको सहभागिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि आफ्नै साथीहरुबाट आलोचना खप्नुपर्नेछ ।
मिथुन : व्यापार व्यावसायमा आजको दिन लगानी नगर्नुनै राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा स’मस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ । विद्यामा सफलता पाउन मिहिनेत गर्नुपर्ला । दिदी बहिनीबाट सहयोगको आश्वासन मात्र प्राप्त हुनेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा रुपैयाँ पैसा हरा’उन तथा लु’टिन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । आर्थिक अप’चलनको मु’द्दा मामिला आइलाग्न सक्छ, काम गर्दा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । तर पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गरिएको लगानीबाट सन्तोषजनक नाफा हुनेछ ।
कर्कट : साझेदारी व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ । पर्यटन सम्बन्धी व्यावसायमा सामान्य चहलपल हुनेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । मायाप्रेम तथा पति प’त्नी बीचको स’म्बन्धको गाँ’ठो क’सिलो भएर जानेछ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुलाई पछाडि पारिनेछ । वैदेशिक यात्राको सम्भावना निकै बलियो रहेको छ । साथीभाइ तथा आफन्तबाट उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
सिंह : विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । पुराना ऋ’ण, रो’ग तथा शत्रुबाट छुट्करा पाइने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ। आफन्त तथा मावली पक्षबाट हरेक क्षेत्रमा सहयोग तथा समर्थन पाइने योग रहेको छ । सत्रु परास्त हुनेछन् भने न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईंकै पक्षमा हुने हुनाले खुशीले उचाइ नाघ्नेछ ।
कन्या : शिक्षामा गरिएको लगानीबाट भनेजस्तो आम्दानी नहुने तथा विद्यार्थी वर्गले चाहेजस्तो सफलता हात लगाउन निकै नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ। भौतिक सम्पत्ति प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घट्ना नहेला भन्न सकिन्न । माया प्रे’ममा अवि श्वास बढ्ने तथा पतिपत्नी बीच एक अर्कालाई श’ङ्काको दृष्टिले हेर्दा समस्या उत्पन्न हुनेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला पेट स’म्बन्धी समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।
तुला : समय अनुकूल नहुनाले आमा तथा परिवारका सदस्यहरु तपाईंदेखि टाढिन सक्छन्, ध्यान दिनुहोला । विद्यार्थीहरुले पढाइ लेखाइमा समय दिन नसक्दा भने जस्तो नतिजा हात लगाउन गाह्रो पर्नेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा अलि बढी ग’म्भीरता अपनाउनु होला, आलोचना गर्नेहरु सक्रिय रहनेछन् । प्रेममा अविश्वास बढ्ने योग रहेको छ । तर पनि कृषि पेशा अपनाउनेहरुले मनग्य रुपैया पैसा सङ्ग्रह गर्न सक्नेछन् ।
वृश्चिक : मु’द्दा मामिला तथा अदालतबाट हुने फैसला तपाईंकै पक्षमा आउनेछन् भने प्रतिस्पर्धीलार्ई परास्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । छोटो दूरीको व्यावसायिक यात्राको तय हुनेछ भने यात्राबाट भनेजस्तो उपलब्धि हासिल हुनेछ । विद्यार्थी वर्गहरुले पढाइमा मिहिनेत गरी राम्रो नतिजा ल्याउन सक्नेछन् । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । भाग्यले साथ दिने हुँदा कामहरु समयमा बन्नेछन् ।
धनु : पढाइ लेखाइमा खासै ध्यान नजाँदा विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछि परिनेछ । कुटुम्बसँग मन मु’टाव बढ्ने हुँदा आजको दिन टाढानै रहनु राम्रो रहेको छ। बोल्दा वा निर्णय गर्दा ध्यान दिनुहोला, आत्म घा’ती पनि हुन सक्छ । खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्यमा स’मस्या आउनेछ । मा’या प्रे’ममा अ’विश्वास बढ्नेछ भने पति प’त्नी बीच विश्वासको वातावरण गुम्ने ख’तरा रहेको छ ।
मकर : सामाजिक कामहरु समयमा नै सम्पादन गर्न सकिने हुँदा मान सम्मानमा वृद्धि हुने छ । राजनीतिकर्मीले सर्वसाधारणको काम गरी पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । पढाइ लेखाइमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिने तथा नतिजा आफै तिर ल्याउन सकिनेछ । भौतिक सम्पत्ति तथा वि’लाशी वस्तुको प्रयोग गर्न पाइने समय रहेकाले मन प्रशन्न हुनेछ । माया प्रे’ममा सा’मीप्यता बढेर जानेछ भने दा’म्पत्य जीवन खुशी रहनेछ ।
कुम्भ : स्वास्थ्य स’म्बन्धी सामान्य सम’स्याले सताउन सक्छ खानपानमा ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यावसायमा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कारोबार फ’स्टाएर जानेछ भने विदेश यात्राको तय गर्न सकिनेछ। परिवार तथा आफन्तजन तपाईंदेखि टाडिनेछन् । राज्यबाट द’ण्ड तथा ज’रिवाना हुन सक्छ, काम गर्दा सजग भएर गर्नुहोला । माया प्रे’ममा धो’का हुनेछ । अनावश्यक ठाउँमा बल प्रयोग हुनुको साथै विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछिपरेको भान हुनेछ ।
मीन : आफन्तजन तथा दाजुभाइबाट प्रशस्त सहयोग पाइनेछ । माया प्रे’ममा सा’मीप्यता बढेर जानेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्य आम्दानी हुने छ । तरल पदार्थ जस्तै हाइड्रो, पानी जस्ता उद्योग व्यावसायमा लगानी गर्दा उचित प्रतिफल पाइनेछ । सवारीसाधन प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेको छ । परिवार तथा सन्तानको प्रगतिमा मन प्रशन्न हुनेछ । विद्यामा तपाईंले गरेको मिहिनेत खेर जानेछैन । तपाईं दिन शुभ रहोस् ।